Labada goolhaaye iyo magaalada uu ugu jecel yahay & dhowr arrimood kale uu ka hadlay Thibaut Courtois – Gool FM
(Madrid) 26 Mar 2020. Goolhaayaha reer Belgium iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Thibaut Courtois ayaa shaaca ka qaaday magacyada labada goolhaaye uu jeclaan jiray markii uu yaraa.
Dhinaca kale Thibaut Courtois ayaa si cad u sheegay in mid ka mid ah uu ahaa halyeeyga kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo xulka qaranka Spain ee Iker Casillas.
Thibaut Courtois oo kaga jawaabayay su’aalo taageerayaashiisa barta Twitterka, ayaa waxaa soo xigtay wargeyska “AS” ee dalka Spain, wuxuuna goolhaayaha reer Belgium uu sheegay in xiddigii uu ugu jeclaa Los Blancos xilligii Caruurnimadiisa uu ahaa Iker Casillas, si la mid ah goolhaayaha reer Holland ee Edwin van der Sar.
Goolhayaha reer Belguim ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in waqtigiisii ugu fiicnaa ee uu ku qaatay Real Madrid ay aheyd, ku guuleysigoodii koobka Spanish Super Cup, iyo kulankii El Clasico.
Yeelkadeeda, goolhayaha kooxda Real Madrid ayaa ka jawaabay su’aal la weydiiyay oo ku saabsan booska uu ka ciyaari karo marka laga reebo shabaq ilaalinta, wuxuuna ku jawaabay.
“Waxaan ka ciyaaray booska daafaca garabka bidix, laakiin madaxii aan ku garaacay kubadda kulankii Valencia, malaha waxaan ka ciyaari karaa dhanka weerarka.”
Ugu dambeyntii Thibaut Courtois ayaa la weydiiyay badbaadintii ugu fiicneynd uu sameeyay, wuxuuna ku jawaabay inay aheyd koobkii adduunka ee 2018 kubad uu ka bad baadiyay Neymar Jr.
Thibaut Courtois ayaa sidoo kale sheegay in labada magaalo uu ugu jeclayahay ay yihiin London iyo Madrid uu ka soo ciyaaray, laakiin haddii aan dooran lahaa, laakiin haddii aan kala dooran lahaa waxaan u jan jeeri lahaa dhanka caasimada Spain, wuxuuna tilmaamay in saaxiibkiisa Vinicius Jr inuu yahay kan ugu dheereeya saaxiibadiisa.